Porofoin’i Ghana fa Tsy Nofinofy Ny Fifidianana Am-pilaminana, Malalaka ary Mifandanja Ao Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2017 12:21 GMT
Filoha voafidin'i Ghana, Nana Akufo-Addo, manome voninahitra an'i Nii Okwei Kinka Dowuona VI, Mpanjakan'ny Vahoaka Ga. Sary an'i Kabil75 nampiasàna ny Creative Commons .
Nana Akufo-Addo mpitarika ny mpanohitra avy amin'ny New Patriotic Party -Antoko Vaovao Ho an'ny Tanindrazana- (NPP) no nandresy tamin'ny fifidianana ho filohan'i Ghana tamin'ny 7 Desambra rehefa nirotsaka fanintelony ho fidiana. 53,85%-n'ny vato tamin'ny fifidianana no azon'i Akufo-Addo, raha 44,4% kosa no azon'ny filoha tapi-draharaha John Mahama.
Ao amin'ny tanibe, izay matetika ny fifidianana no korontanin'ny herisetra, ny halabato, ny fahatapahan'ny aterineto amin'ny andron'ny fifidianana ary ireo tsy fanarahan-dalàna hafa, dia nanamafy ny toerana maha-mpisava làlana ny demaokrasia aty Afrika azy ny endrika am-pilaminana nananan'ny fifidianana tany Ghana. Noderain'ny vondrona iraisam-pirenena ny fomba nitondran'ilay firenena ny fifidianana.
Vao haingana teo, notsipahan'ny filoha Gambiana Yahya Jammeh, izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 22 taona ny voka-pifidianana, rehefa resin'i Adam Barrow mpitarika ny mpanohitra izy.
Andro vitsy monja teo aloha, nilaza izy fa manohitra izay mety ho tsy fanarahandalàna, nanaiky ny fahareseny izy ary niantso an'i Barrow tamin'ny finday mba hiarahaba azy noho ny fandreseny, ary nolazainy fa tsy “manana lolom-po” izy. Toa niova fo no fahitàna azy.
Nandefa izao bitsika izao i Chris Mwangi, Keniana mpanao lalàna, mampiako ireo fihetseham-po mitovy amin'izany:
Iray amin'ireo firenena Afrikana tsy manome zavatra ratsy hotaterina amin'ny media tandrefana mikasika an'i Afrika mihitsy i Ghana.
Tsy marina tanteraka ny zavatra lazainy, na izany aza, araka ny tsipihan'i Gary Al-Smith:
Uhm @CNN, tsy nahalala ireo Ghaneana ” mitsangana milahatra mba hahazo entana” na “miady mba hahazo sakafo” aho. Ary mipetraka ao aho.
Nihetsika tamin'ny fandresen'ny mpanohitra NPP i Akwasi Sarpong, Ghaneana mpanolotra ao amin'ny BBC, tamin'ny fizaràna zava-miseho mahavariana iray:
Ary mitohy toy izany ny tantara mahavariana: rehefa mandresy amin'ny fifidianana ny Antoko Repoblikana Amerikana, mandresy ihany koa ny NPP ao Ghana & dia Mifamadika amin'izay koa.
Hatry ny taona 1992, raha nampiditra ny demokrasian'ny antoko maro i Ghana, hita ho niaraka nanaraka maodely mitovy ireo mpifidy any Ghana sy Etazonia.
Ghaneana mpitoraka bilaogy sady mpanoratra, Jemila Abdulai, nanipika ny fitomboan'ny demokrasia any Ghana:
Milaza ZAVATRA BETSAKA ny zava-niseho hoe misafidy ny hifidy solombavambahoaka avy ao amin'ny NPP ireo lehiben'ny NDC. Mitombo mihoatra ny “politikan'antoko” ny demokrasian'i Ghana. #GhanaDecides (MifidyGhana)
Mpampiasa Twitter hafa nizara ity zava-niseho mahavariana manaraka ity:
Ghana ihany no hany firenena ahitanao ny filoha voafidy sy ireo mpanohana azy 💃🏿💃🏿💃🏿mandihy amin'ny hiran'ny fampielezankevitry ny mpanohitra #GhanaDecides Onaapo 😂😂
Nankalaza ny fandreseny niaraka tamin'ny hiran'ny fampielezankevitr'ilay mpifaninana resy, John Mahama, ‘Onaapo’, ireo mpanohana ny Filoha Voafidy, Nana Akyfo-Addo. Tena lasa nalaza be tokoa ilay hira, hany ka efa namoaka “remix” an'ilay hira sahady ilay mpihira Ghaneana Barima Sidney.
Niaiky ny fahareseny i Mahama, ary niantso an'i Akufo-Addo mba hiarahaba azy na mbola tsy navoaka akory aza ireo vokatra ofisialy.
Nanipika izao i Silver Kayondo:
Mamaky ny kabarim-paneken'i Mahama. Lehilahy tena misaina. Tsy olona resy izy. Mpandresy izy eo amin'ny lafiny irain'ny #tantara & #mahaizynyolona! #GhanaMisafidy
Nanoratra izao i Kuukuwa Manful:
46 taona taorian'ny nahalasa filoha ny rainy, Edward Akufo-Addo, lasa filoha voafidin'i Ghana i Nana Addo Dankwa Akufo-Addo #GhanaDecides
Filoha tsy mpanatanterak'i Ghana, nanomboka ny taona 1970 ka hatramin'ny 1972 ny rain'i Akufo-Addo, Edward Akufo-Addo.
Masesebe Wa Ramahuma, Afrikana Tatsimo mpitati-baovao, naneho izao faniriana manaraka izao:
Arabaina ireo olo-malaza mainty. Maniry aho hoe ho afaka manao fifidianana zara raha misy na tsy misy loza mihitsy ireo firenena Afrikana, ka ho voavonjy i #Afrika. #GhanaDecides
Greenbook Ghana, sehatra iray mampiseho ireo zava-bitan'ny Filoha nodimbiasana, Mahama, miandry fatratra ny roa amin'ireo fampanantenana lehibe tamin'ny fampielezankevitra nataon'i Akufo-Addo.
@GabbyDarko @adano82 miandry fatratra amin'ny fanomezana ilay orinasa iray isaky ny distrika izahay #ghanaelections (fifidianana ghana) #GhanaMisafidy
@bonti_benjamin @amiddleGh miandry fatratra ilay tohodrano 1, tanàna 1 izahay #ghanaelections #GhanaDecides
Nampanantena tohodrano hanaovana taridrano ho an'ny tanàna rehetra any amin'ny faritra avaratry ny firenena, ary orinasa iray isaky ny distrika 216 ao amin'ny firenena, i Akufo-Addo, fampanantenana tamin'ny fampielezankevitra izay inoan'ny maro fa tsy ho afaka tanterahana.
Nanao fikarohana tao amin'ny mpifanila vodirindrina amin'i Ghana, Nizeria, ny mpampiasa Twitter Ikon Massive:
Filoha zara raha nampiasaina, amidy. Tsara kokoa, afaka alainao maimaimpoana izy. Liana ve ianareo ry Nizeriana. ? #GhanaMisafidy
Ny farany, nampahatsiahy ireo Ghaneana i Kinna, tomponandraikitr'ilay tetikasa @GhanaDecides:
Ao anatin'ity fientanentanana #GhanaDecides rehetra ity, andao hotsiahivina fa ireo fifidianana, na tena zava-dehibe tokoa aza, dia ampahany bitika ihany amin'ny demokrasia.